Blockchain - Ọdịnihu nke Teknụzụ Ego | Martech Zone
A na - ahụ okwu cryptocurrency na blockchain ebe niile. Enwere ike ịkọwa uche ọha na eze dị otú ahụ site na ihe abụọ: ụgwọ dị elu nke Bitcoin cryptocurrency na mgbagwoju anya nke ịghọta isi ihe nke teknụzụ. Akụkọ banyere mmalite nke ego dijitalụ mbụ na teknụzụ P2P dị n'okpuru ga-enyere anyị aka ịghọta "oke ọhịa" a.
Mgbasawanye na Network
Enwere nkọwa abụọ nke Blockchain:
• Na-aga n'ihu n'usoro yinye nkanka nwere ihe ọmụma.
• Replicated nchekwa data ekesara;
Ha abuo bu ezi okwu n’ezi okwu ha mana ha enyeghi aziza ajuju banyere ihe obu. Maka nghọta ka mma banyere teknụzụ, ọ dị mkpa icheta ụlọ ọrụ ntanetị kọmputa nke dị na ha na-achịkwa ahịa usoro IT nke oge a.
Na mkpokọta enwere ụdị ụlọ abụọ:
Netwọk sava ndị ahịa;
Ndị ọgbọ ndị ọgbọ.
IZIRingTA na ụzọ mbụ na-egosi njikwa ihe niile: ngwa, data, nnweta. Ebumnuche sistemụ na ozi niile zoro n'ime ihe nkesa ahụ, nke na-ebelata arụmọrụ arụmọrụ nke ngwaọrụ ndị ahịa ma hụ na nnukwu ọsọ ọsọ. Usoro a enwetawo nlebara anya kachasị nke ụbọchị anyị.
Ndị ọgbọ ndị ọgbọ ma ọ bụ nke ekwesighi ekwesighi, ha enweghị ngwa ọrụ, ndị niile sonyere nwere ikike nha anya. Na ụdị a, onye ọrụ ọ bụla abụghị naanị onye na-azụ ahịa kamakwa ọ na-eweta ọrụ.
Versiondị mmalite nke netwọk ndị ọgbọ na ibe bụ USENET kesara ozi izi ozi mepụtara na 1979. Afọ iri abụọ sochirinụ bụ akara site na okike P2P (Peer-to-Peer) - ngwa dị na mpaghara dị iche iche. Otu n'ime ihe atụ kachasị ama ama bụ ọrụ Napster, netwọkụ na-ekerịta faịlị otu n'otu, ma ọ bụ BOINC, sọftụwia sọftụwia maka kesaa nghazi, yana BitTorrent protocol, nke bụ ntọala nke ndị ahịa iyi ugbu a.
Usoro ndị dabere na netwọkụ dị iche iche na-aga n'ihu na-adị, mana na-achọpụta nke ọma na ndị ahịa sava na-agbasa ma na-agbaso mkpa ndị ahịa.
Ihe ka ọtụtụ n'ime ngwa na sistemụ maka arụmọrụ nkịtị chọrọ ikike iji rụọ ọrụ data. Enwere ọtụtụ ụzọ iji hazie ọrụ dị otú ahụ ma otu n'ime ha na-eji usoro ndị ọgbọ. Ekesa, ma ọ bụ ihe yiri ya, ọdụ data dị iche iche site n'eziokwu bụ na echekwara ozi na akụkụ ma ọ bụ zuru ezu na ngwaọrụ ọ bụla nke netwọk ahụ.
Otu n'ime uru dị na sistemụ dị otú a bụ nnweta data: ọ nweghị otu isi okwu nke ọdịda, dịka ọ dị na nchekwa data dị na otu sava. Ihe ngwọta a nwekwara oke ụfọdụ na ọsọ nke imelite data ma kesaa ha n'etiti ndị otu netwọkụ. Usoro dị otú a agaghị eguzogide ibu nke ọtụtụ nde ndị ọrụ na-ebipụta ozi ọhụrụ mgbe niile.
Teknụzụ blockcheni na-ewere ojiji nke kesara nchekwa data nke blocks, nke bụ ndepụta jikọtara (ngọngọ ọ bụla na-esote njirimara nke gara aga). Onye ọ bụla so na netwọkụ na-edobe nnomi arụmọrụ niile emere maka oge niile. Nke a agaraghị ekwe omume na-enweghị ụfọdụ ihe ọhụụ emere iji hụ nchekwa na nnweta nke netwọkụ ahụ. Nke a na - ewetara anyị na “ogidi” ikpeazụ nke blockcheni - cryptography. Kwesịrị ịkpọtụrụ a ụlọ ọrụ mmepe ngwa iji go ndị na-emepụta ngọngọ iji jikọta teknụzụ a na azụmahịa gị.
Mgbe ị mụsịrị ihe ndị bụ isi na akụkọ ihe mere eme nke okike, ọ bụ oge iji kpochapụ akụkọ ifo metụtara okwu "ngọngọ". Tụlee otu ihe atụ dị mfe nke mgbanwe ego dijitalụ, ụkpụrụ nke ọrụ nke teknụzụ blockchain na-enweghị kọmputa.
Were ya na anyị nwere otu ndị mmadụ 10 chọrọ ka ha nwee ike ịrụ ọrụ mgbanwe ego na-abụghị usoro akụ. Tụlee nke ọma ihe omume ndị sonyere na sistemụ ahụ na-eme, ebe akwụkwọ mpempe akwụkwọ ga-anọchi anya ngọngọ ahụ:
Onye ọ bụla so na ya nwere igbe nke ọ ga-etinye mpempe akwụkwọ yana ozi gbasara azụmahịa niile emechara na sistemụ ahụ.
Onye ọ bụla sonyere na-anọdụ na mpempe akwụkwọ na mkpịsị odee ma dị njikere idekọ azụmahịa niile a ga-eme.
N’ebe ụfọdụ, onye sonyere na nke abụọ chọrọ iziga 2 dollar na onye so na 100.
Iji mezue azụmahịa, Onye esonyere Nke 2 na-ekwupụta onye ọ bụla: "Achọrọ m ịfefe 100 dollar na Nke 9, ya mere dee ihe a na mpempe akwụkwọ gị."
Mgbe nke ahụ gasịrị, onye ọ bụla na-enyocha iji hụ ma onye so na 2 nwere nguzozi zuru oke iji mezue azụmahịa ahụ. Ọ bụrụ otu a, onye ọ bụla na-edetu banyere azụmaahịa ahụ na mpempe akwụkwọ ha.
Mgbe nke ahụ gasịrị, a na-ewere azụmahịa ahụ dị ka nke zuru oke.
Mmezu nke azụmahịa
Ka oge na-aga, ndị ọzọ so na ya ga-arụkwa ọrụ mgbanwe. Ndị sonyere na-aga n'ihu ịkpọsa ma dekọọ azụmahịa ọ bụla emere. N'ihe atụ anyị, azụmahịa 10 nwere ike ịdekọ na otu mpempe akwụkwọ, mgbe nke a gasịrị ọ dị mkpa itinye mpempe akwụkwọ emechara n'ime igbe ma were nke ọhụrụ.
Na-agbakwunye mpempe akwụkwọ na Igbe
Eziokwu ahụ bụ na etinyere mpempe akwụkwọ n'ime igbe pụtara na ndị niile sonyere kwenyere na ndaba nke arụmọrụ niile emere na enweghị ike ịgbanwe mpempe akwụkwọ n'ọdịnihu. Nke a bụ ihe na-ahụ na iguzosi ike n'ezi ihe nke azụmahịa niile dị n'etiti ndị na-atụkwasịghị ibe ha obi.
Oge ikpeazu bụ ikpe izugbe nke nsogbu nke ndị ọchịagha Byzantine. Na ọnọdụ nke mmekọrịta nke ndị sonyere n'ime ime obodo, ụfọdụ n'ime ha nwere ike ịbụ ndị na-eme ihe ọjọọ, ọ dị mkpa ịchọta atụmatụ mmeri maka mmadụ niile. Enwere ike ilele usoro idozi nsogbu a site na ụdị nke asọmpi.
Na akụrụngwa nke ego, Bitcoin, ịbụ onye izizi oke cryptocurrency, egosila etu esi egwu site na iwu ọhụrụ na-enweghị ndị na-anọchite anya ya na njikwa site n'elu. Agbanyeghị, ikekwe ọbụlagodi nsonaazụ dị mkpa nke mmalite nke Bitcoin bụ imepụta teknụzụ blockchain. Kpọtụrụ ụlọ ọrụ na-emepe emepe iji wepụta ndị mmepe ngọngọ iji tinye teknụzụ a na azụmahịa gị.
Tags: blockchainmmepe blockchainblockchain technologyTechnology Technology